Shiinaha API Ball 11AX iyo Kursi loogu talagalay Soosaarka iyo Soo Saarista Qalabka Wadada Dhulka | N&D Carbide
* Soo saaraha shahaado API
* Tungsten Carbide, Nickel / Cobalt / Titanium
Gawaarida bambooyinku waxay ka samaysan yihiin kubbado iyo kuraas waxayna yihiin qayb muhiim ah marka aad ku hoos shaqeyneyso cadaadis sare oo Haydaroolig ah qoto dheer darteed. Kaliya qaabeyn qumman iyo xulashada saxda ah ee maaddada ayaa damaanad qaadi kara noloshooda adeeg.
Kubadaha waalka iyo kuraasta waalka ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa goobaha saliida, waxqabadkoodu wuxuu si toos ah u saameeyaa saameynta isticmaalka iyo nolosha adeegga bambooyinku. Isku-darka kubbadda-iyo-kursi kasta waa faakiyuum la tijaabiyey si loo hubiyo in shaabad dhammaystiran laga helayo dhammaan meelaha lagala xiriiro.
Kubadda & kursiga carbide Tungsten, oo laga sameeyay alaabada ceeriin ee bikradda ah, waxay leeyihiin madax adkaansho, adkeysi-diidmo, caabbinta daxalka, iyo iska caabbinta foorarka Waxaan awoodnaa inaan ku siino Kubadaha Carbide waxyaabo kala duwan oo la doonayo oo ay ka mid yihiin TC Cobalt, TC Nickel iyo TC Titanium, iyo Kubadaha TC waxaa loo soo saaray sida ku cad heerarka ISO iyo Anti-Friction Bearing Manufacturer Association (AFMBA).
Tungsten carbide waalka kubbada iyo kursiga ayaa si weyn loogu isticmaali doonaa waalka aan tooska ahayn ee marinka u ah bamka nuugista saliida ee noocyada kala duwan leh awgood oo sareeya, xirnaansho iyo u adkaysiga daxalka iyo sidoo kale ladagaalanka wanaagsan iyo astaamaha shoogga kulul saameynta bamgareynta iyo wareegga hubinta bamka dheer ee kor u qaadista ciidda, gaaska iyo dhukunka ay ku jiraan saliida qaro weyn ee ceelasha.
Kubadaha maran iyo kubadaha dhammaaday labadaba waa la bixin karaa. Kubadaha caadiga ah iyo kuwa aan caadiga ahayn ayaa la heli karaa.
Qalabka API ee kubbadda iyo kuraasta
Ball Ball iyo Taxanaha Kuraasta
Waxaan kuu soo bandhigeynaa waalka kubbada iyo adeegyada iibka ka hor, adeegyada iibka kadib oo ay ka mid yihiin hagida iibka, bixinta macluumaadka & taageerada farsamada, bixinta farsamada farsamada, qorsheynta wax soo saarka oo la bixiyo, jadwalka wax soo saarka oo la bixiyo, taageerada kormeerka iyo shahaadada la bixiyo.
Hore: Tungsten Carbide Bush ee saar Bamka Korantada
Xiga: Ceeji Jir iyo Fadhi